Robbie phone | Gcina A Isitimela
umbhali: Robbie phone
ekhaya > Robbie phone
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Yeyona iphupha - hamba eholideyini uze kuhlawulwa ngayo. Hayi kuphela, kodwa abe iindiza zakho, yokuhlala, kunye nokutya khokhela nawe. ayinakwenzeka, kunene? Akukho ndlela nabani na ehlabathini anokuhlawula ngayo akukho mntu unje onokuba namava ngaye…
5 Hacks Transport Handy For Luton abahambela
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Ivame yi isithunzi elide kummelwane wayo ezinkulu London, Luton e Bedfordshire i gem ofihlakeleyo leyo kude utyelelo. Yasekwa ngonyaka emva kokuba kuthinjwe okwilizwe yi amaSaxons kwi leSithandathu Century, yaqala ubomi njenge 'Tun' (zokuhlala) leyo wenziwe…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu EBritani ubusiswa uthungelwano kaloliwe intabalala ethe nefuthe imbali yayo kunye nophuhliso lwezoqoqosho ezizukulwaneni. Ukuba uthe umntu othanda kaloliwe, holide UK kaloliwe liququzelela imisebenzi umdla kwiindawo zonke indlela ukususela Aberdeen ukuya Penzance. Ke ukuba intliziyo yakho iseti…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Brisbane na imali Queensland kwaye sisikelelwe ezinika A-uluhlu njenge Sea World, i iiloni omhle gadi South Bank, kunye neBridge Bridge, kunye nezinye ezininzi - ibhulorho ye-cantilever ende kakhulu e-Australia. Kwakhona isixeko creative, kunye neemyuziyam zobugcisa kunye neegalari kunye neefestile zekrisimesi…